Wararka - Enviro iyo Michelin waxay ku heshiiyeen shuruudaha iskaashiga istiraatiijiyadeed
Enviro iyo Michelin waxay ku heshiiyeen shuruudaha iskaashiga istiraatiijiyadeed
Nidaamyada Deegaanka ee Stockholm-Scandinavian (Enviro) iyo Michelin waxay dhameystireen faahfaahinta iskaashiga dib-u-warshadaynta taayirka, lix bilood ka dib sidii markii hore la filayay.
Labada dhinac waxay hadda gaareen heshiis ku saabsan shuruudaha aasaasiga ah ee aasaaska warshad dib-u-warshadaynta taayirada wadajirka ah iyo heshiis ku saabsan heshiiska liisanka ee nidaaminaya shuruudaha isticmaalka tiknoolajiyada Enviro tire pyrolysis. Enviro waxaa lagu dhawaaqay 22-kii Diseembar.
Labada shirkadood waxay ku dhawaaqeen iskaashi qorshaysan bishii Abriil, iyada oo ujeedadu tahay in la dhammaystiro macaamilka bisha Juun, iyada oo ujeedadu tahay in loo isticmaalo tiknoolajiyadda Enviro dib-u-warshadaynta qalabka caagga ah Iyada oo qayb ka ah macaamil ganacsi, Michelin wuxuu helay saami dhan 20% shirkadda Sweden.
Marka la eego qodobada heshiiska, Michelin waxay hadda xaq u leedahay inay dhisto warshad dib u warshadeyn u gaar ah iyada oo ku saleysan teknolojiyadda Enviro.
Markii la aasaasayo wershaddan oo kale, Michelin wuxuu siinayaa Enviro hal mar oo go'an, oo go'an oo aan soo noqnoqonayn, wuxuuna ku siinayaa lacag-bixinno ku saleysan boqolkiiba iibka warshadda.
Sida ku xusan qawaaniinta Enviro, heshiiska shatiga wuxuu ansax noqonayaa ilaa 2035, shirkadduna waxay kaloo xaq u leedahay inay sii wado abuurista dhir dib-u-warshadaynta oo lala yeesho dhinacyada kale.
Gudoomiyaha Enviro Alf Blomqvist wuxuu yiri: "In kasta oo uu jiro faafka iyo dib u dhaca ku yimid, hadana waxaan awoodnay inaan dhameystirno heshiis aan ku dhiseyno iskaashi istiraatiijiyadeed Michelin."
Blomqvist wuxuu sheegay in heshiisku uu yahay "guul muhiim ah oo muhiim ah" Nidaamyada Deegaanka ee Scandinavia, sidoo kale waa "xaqiijin aad muhiim u ah tikniyoolajiyadeena."
Wuxuu yiri: "Sanad markii xaalado caafimaad oo aan horay loo arag ay nagu adkeeyeen inaan 'wada qabsano' oo aan jaan goynno wadashaqeyn mustaqbalka ah, waxaan ku guuleysanay inaan heshiis ka gaarno mabaadi'da muhiimka ah."
In kasta oo wada xaajoodyada la xirey Covid dartiis, Blomqvist wuxuu yiri dib u dhaca wuxuu siiyey Michelin iyo shirkadaha kale ee caalamiga ah ee soo saara si ay u tijaabiyaan kaarboonka madow ee ay soo ceshatay Enviro.
Heshiiska wuxuu ku xiran yahay ogolaanshaha kama dambeysta ah ee saamileyda Enviro shir aan caadi aheyn oo guud oo la qaban doono bisha Janaayo ee sanadka soo socda.
Ka hel wararkii ugu dambeeyay ee saamaynaya warshadaha caagga ah ee yurub ee ka soo baxa wararka daabacan iyo wararka khadka tooska ah, laga bilaabo wararka waaweyn illaa falanqaynta cad.
@ 2019 Joornaalka Yurub. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan Nala soo xiriir European Rubber Journal, Crain Communication LTD, EC2V 8EY, 11 Ironmonger Lane, London, UK
Waqtiga boostada: Jan-16-2021
Dufcaddii Pyrolysis Plant, Taayirada Pyrolysis, Warshad Pyrolysis joogto ah, Sifee caag ah, Mashiinka Dib-u-warshadaynta Taayirada Qashinka, Mashiinka Dib-u-warshadaynta Caaga,